China SD6K LGP Bulldozer Emeputa na Nweta | Shehwa
SD6KLGP katapila kwadebere n'ụzọ na taya III electronic akara engine, haịdrọlik mgbapụta na moto, atọ nkebi ọsọ ọsọ Mbelata, centralize4d jụrụ usoro, electric nkezi njikwa nnyefe na pilot haịdrọlik akara. Bulldozer SD6KLGP nwere ezigbo ike ...
SD6KLGP katapila kwadebere n'ụzọ na taya III electronic akara engine, haịdrọlik mgbapụta na moto, atọ nkebi ọsọ ọsọ Mbelata, centralize4d jụrụ usoro, electric nkezi njikwa nnyefe na pilot haịdrọlik akara. Bulldozer SD6KLGP nwere ike siri ike, ọgụgụ isi dabara na mgbanwe ibu, ọrụ nlekọta isi, ọrụ mgbanwe na arụmọrụ dị elu. Ujo a na-ekpochi akpu nwere nnukwu oghere dị n'ime ya na mpaghara ọhụụ dị mma, ọ dị mma ma dịkwa mma. SD6KLGP bulldozer bụ igwe dị mma maka owuwu nke oke osimiri dị n'akụkụ mmiri, ala ubi mmanụ, idebe gburugburu ebe obibi na ala opitoropi.
Dozer: Ugboro ala
Ọrụ ọrụ (gụnyere ripper) (Kg): 20100
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 26.7
Ihe nlele anya (mm): 2935
Nkeji nkwụsị ala (mm): 425
Ike ịgba ụra (m): 4.1
Obosara (mm): 4150
Max. Igwu ala omimi (mm): 506
N'ozuzu ya (mm): 570543363225
:Dị: WeiChai WP10G190E354
Obosara akpụkpọ ụkwụ (mm): 1100
Gaanụ n'ihu (Km / h) 0-11
Umpdị mgbapụta: mgbapụta dị elu mgbapụta
Modularize Usoro nke atọ
Nke gara aga: SD6K Bulldozer
Osote: SD7K Bulldozer